Madaxwyne Yuusuf oo maanta shir jaraa'd ka sheegay in Mareykanka raali ka yahay howlaha dowladda ay ka waddo magaalada Muqdisho iyo qaraxyada ka dhacaya Xamar oo ka sii daraya. Ruunkinet 18/08/07
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Col. Cabdullahi Yuusuf ayaa maanta shir jaraa'd ku qabtay aqalka madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ee Villa Soomaaliya.
Col. Yuusuf oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in uu dhawaan u aaday magaalada Nayroobi kadib markii uu casumaad ka helay dowladda Mareykanka safiirka ay ku leedahay dalka Kenya iyo masúuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ku sugnaa magaalada Nayroobi.
Madaxeyne Yuusuf oo ay si weyn u ilaalinayeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa sheegay in kulankii uu la qaatay masúuliyiinta dowladda Mareykanka ay ka wada hadleen arrimaha Soomaliya asagoo warkiisa raaciyay in ay dowladda Mareykanka si weyn raali uga tahay howlaha dowladda federaalka ay ka waddo Xamar ee u badan howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ee dalka hatiyay.
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ayaa sidoo kale sheegay in ay macaawimada dowladda Mareykanka ay sii neysa dowladda federaalka ay sii kordhisay sanadkaan oo ay gaarsiisay lacag ku dhow 2 boqol oo milyan.
Dhanka kale, qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa si kordhay maalmahii la soo dhaafay ayadoo ay haatan aad u bateen miinooyinka loo dhogo ciidamada Itoobiya, kuwa dowladda iyo masúuliyiinta dowladda ee rayid ah.
Sidoo kale, dilalka iyo xariga loo geeysanayo dadka rayid ah ayaa sidoo kale sii kordhay ayadoo ay u muuqdaan shirarka dib u heshiisiinta ah ee laga wado magaalada Muqdisho kuwo aan guul laga gaarin.